Chikumi 20, 2021
FILE - Sudanese refugees children pose for photographs in the Treguine camp, in Hadjer Hadid, in the Ouaddaï region of eastern Chad, on March 24, 2019.
Zimbabwe nemusi weSvondo yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day apo Unieted Nations iri kuchechema chema nekuwedzera kwehuwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kusiya misha yavo vachienda muhupoteri.
Zuva iri raimbonzi Africa Refugee Day rakatanga kucherechedzwa musi wa 20 Chikumi 2001 senzira yekucherechedzawo makore makumi matatu United Nations yaita musangano mukuru wevapoteri kana kuti World Refugee Day muna 1951.
Nyanzvi munezvehupoteri VaNorman Pinduka vaudza Studio 7 kuti African Union, SADC nemamwe masangano vanofanira kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika muAfrica kuti vakawanda vasagume vave muhupoteri.
Muzvinafundo Donald Chimanikire vati ino inguva yakaoma kune vanoda kuenda muhupoteri nekuti zvinonetsa nekuda kwekupararira kuri kuita chirwere cheCovid-19.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chirikuSouth Africa VaLiberty Mapuranga vati vanhu vari kutiza hurombo munyika vanofanirawo kutorwa sevapoteri vakati nyaya dzezvehupfumi dzinoda kugadziriswa.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitamba vaudzawo studio 7 kuti nyaya dzehupfumi dzinoda kugadziriswa.
Kunyangwe zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupotera kunyika dzakaita seBotswana ne South Africa, Zimbabwe iri kuchengetawo zvizvarwa zvedzimwe nyika kuTongogara Refugees Camp kuChipinge. Vachitaura neStudio 7 nezvezuva revapoteri, munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu, VaSimon Masanga vatiwo Zimbabwe vapoteri vari munyika vanosvika zviuru gumi nezvishanu.
VaMasanga vati havo zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kunotsvaga mafuro manyoro hazvibatwe sevapoteri. Asi vati havo hurumende yakaisa mutemo wekubatsira vanoshanda kunze ava kana kuti Labour Migration Policy
Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiri wenyika yeAmerica VaJoe Biden vati vanocherechedza zuva iri vachiti vakazvipira kubatsira vapoteri nechikafu uye kuita hurukuro dzekupedza hondo pasi rose.
Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) rinoti pasi pese vanhu vanosvika mamiriyoni makumi masere nemaviri nechidimbu vairarama muhupoteri pakapera gore ra2020 nekuda kwekusagadzikana munyika dzavo.
UNHCR inotiwo vakawanda vevapoteri ava varikubva kunyika shanu dzinoti Syrian Arab Republic, Venezuela, Afghanistan, South Sudan neMyanmar. UNHCR inoti nyika yeTurkey ndiyo irikuchengeta vapoteri vakawanda ichitevererwa neColumbia Zuva revapoteri rinocherechedzwa musi wa20 Chikumi gore rega rega
Mukuru weUNHCR kana kuti Assistant High Commissioner Amai Gillian Triggs vaudza Studio 7 kuti pane vari muhupoteri ava, pane zviuru makumi mana nevasere kubva muzana kana kuti 48% vana kana kuti ndevechidiki.